मानपदवी नदिने सरकारको निर्णयको सर्वत्र विरोध - Khelpati
मानपदवी नदिने सरकारको निर्णयको सर्वत्र विरोध
सोमवार, आश्विन ५, २०७७ खेलपाटी संवाददाता
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)का स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई मानपदवी नदिने सरकारको निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको छ ।
संविधान दिवसका अवसरमा ५ सय ९४ जनालाई विभिन्न तक्मा तथा विभूषण दिने निर्णय गरेको सरकारले सागका स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई सूचिमा समावेश गरेको छैन ।
राष्ट्रको गौरव बढाउने खेल क्षेत्रलाई मानपदवी नदिएर सरकारले खेलाडीको अपमान गरेको सम्बद्ध क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरुको टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडी संघले मानपदवीबाट खेलकुद क्षेत्रले अपमान महशुश गरेको भन्दै सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ ।
संघले बिज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारले मानपदवीबाट बिमुख गर्दा खेलाडीले अपमानको महशुश गरेको उल्लेख गरेको छ ।
राखेपका पूर्व उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाले सागका स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई मानपदवी नदिने निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले सागको मिसन प्रमुखको हैसियतमा माफी माग्दै यसअघि, आठौं सागका ३२ जना स्वर्ण पदकधारी खेलाडीलाई गोर्खा दक्षिण बाहु तेस्रोबाट विभूषित गरेको स्मरण गराएका छन् ।
यस्तै, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले सरकारको निर्णयले सम्पूर्ण खेल जगतको अपमान भएको बताएका छन् । उनले खेलाडीलाई विभूषणबाट बञ्चित गर्ने निर्णयको सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेवारी खेलकुद मन्त्री र सदस्य सचिवले लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै, राखेपका बोर्ड सदस्य गोबिन्द भट्टराईले पदक र विभूषणबाट केही खेलाडी र पदाधिकारीलाई मात्र सम्मान गरिएको उल्लेख गर्दै राखेप सदस्य सचिवले प्राप्त गरेको पदवीलाई मौन वहिष्कार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उनले खेलकुदको एकता कायम राख्न गौरिका सिंह र अनु अधिकारी जस्ता खेलाडीको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
१३ औं सागमा नेपालले ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९६ कास्य गरि २ सय ७ पदक जितेको छ । नेपाली खेलकुदको इतिहासमा नेपालले गत बर्ष भएको १३ औं सागमा सर्वाधिक स्वर्ण सहितका पदक प्राप्त गरेको थियो ।
तर संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले दिने विभूषणमा धेरै स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई बाहिर राखिएको छ ।
सरकारले विभूषणका लागि सबै खेलाडीलाई फर्म समेत भर्न लगाएको थियो । तर अन्तिममा बिना कारण विभूषण दिने सूचिबाट खेलाडीलाई सरकारले बाहिर राखिएको हो ।
विभागीय टिमबाट सागमा प्रतिनिधित्व गरेका १५ जना खेलाडीलाई भने विभूषण दिने सरकारको निर्णय छ । विभागको सिफारिसमा १५ जना विभागीय खेलाडीले तक्मा प्राप्त गरेका हुन् ।
तर घरेलु खेलकुदका नेतृत्व तहमा रहेका अधिकारीले आवश्यक पहल गर्न नसक्दा विभाग बाहिरबाट सागमा स्वर्ण जित्ने खेलाडी मानपदवीबाट बाहिर परेका छन् ।
राखेपका पूर्व उपाध्यक्ष तिम्सिनालाई कोरोना
राखेप सदस्य लाखे र श्रेष्ठ सम्मानित
कुँवरलाई एनआरएनको बधाइ
खेलाडीको पीडा बुझेको छु - हरि खड्का
रुसी ह्याकरको निशानामा टोकियो ओलम्पिक
रविको सनसनीपूर्ण क्रिकेट यात्रा !
आर्सनलको विजयी सुरुवात
पाण्डे र शंकर चम्किदा हैदराबादको सहज जित
रोनाल्डोको कोरोना रिपोर्ट फेरी पोजेटिभ !
एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई कोरोना